Malunga nathi - HONGKONG HUIYUAN International Trade Co., Ltd.
HONGKONG HUIYUAN urhwebo lwamanye amazwe Co., Limited
I-HONGKONG HUIYUAN urhwebo lwamanye amazwe i-Co., Limited yenye yezona zinto zinkulu zenziwe ngentsimbi kunye ne-aluminium kunye nelithumela kwelinye ilizwe e-china. Ifunyanwa kwiphondo laseShandong laseTshayina, kufutshane neQingdao Port kunye neTianjin Port, ukulayishwa okukhawulezayo kwemithwalo kunye nokugcinwa kwempahla kulondolozo lwenkampani kukho imigca emibini yemveliso ye-GI enomthamo wemveliso yonyaka we-600,000MT. Enye ye-GI line yenzelwe ngokukodwa ukuvelisa umgangatho ophezulu we-coil we-coil we-coil woKwakha kunye neZakhiwo. Inkampani inemveliso enye ye-PPGI kunye nomthamo we-150,000MT ngonyaka. Imigca yokuvelisa iikhoyili zentsimbi, imigca emibini yemveliso yekhoyili yentsimbi eshicilelweyo yentsimbi kunye neendlela zokusika ezishushu zentsimbi ezishushu. Inkampani ifumene izatifikethi ze-ISO 9001-2008, ISO14001-2004 kunye ne-OHSAS18001.
Ivenkile yokumisa enye yeemveliso zentsimbi, iiprofayili zealuminium kunye nezinto ezilukhuni, ziyahlangabezana nazo zonke iimfuno zakho. I-Indepent Logistic eMoyeni, uloliwe kunye nolwandle, inikezela ngenkonzo efanelekileyo ngomgangatho olungileyo.
I-HUIYUAN iqinisekisiwe nge-ISO9001-2000 yokuqinisekisa ubunyani benkqubo, ukuba neqela lovavanyo kunye nobungqongqo kwiqela lokuhlola ukuqinisekisa umgangatho ngokulanda yonke ikhosi ukusuka kwimveliso ukuya kuthumelo. Esi siqinisekiso abathengi bethu banokufumana ezona mveliso zisemgangathweni kunye nolwalamano olusenyongweni kunye nathi.
Isinyithi esomeleleyo sinokuthengisa okupheleleyo kunye neqela lenkonzo kurhwebo lwangaphandle, kwaye sinokucwangcisa imisebenzi yemveliso kunye nokuthumela ngaphandle ngokweemfuno ezahlukeneyo zobugcisa kunye nemikhwa yeshishini yamazwe ahlukeneyo kunye nemimandla. Sithembele kwinkqubo engqongqo yemveliso kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho, ukuthuthwa kwempahla yobuchwephesha kunye nenkonzo yokuqinisa izibuko, ukukhethwa kwenkampani yokuhambisa umgangatho ophezulu, inkonzo elandelwayo ngexesha elifanelekileyo nangokufanelekileyo kwixesha elizayo ukuqinisekisa ukuba iimveliso zenkampani zinokuhanjiswa ngexesha kwaye zigcinwe ubungakanani buqinisekisiwe.
Ukuze sisebenzele abathengi ngcono ekhaya nakumazwe aphesheya, sinoxanduva lokutyikitya izivumelwano ezifanelekileyo zempahla yenkampani yokuthumela kwelinye ilizwe, indawo yokubhukisha embindini wenqanawa, ukupakisha ukuhlolwa kwakhona, ukubhengezwa kwamasiko kunye nezinye iinkqubo. Okwangoku, iimveliso zenkampani zithunyelwe eMzantsi Korea, eMzantsi-mpuma Asia, kuMbindi Mpuma, eMpuma Yurophu, eMzantsi Melika nakwamanye amazwe nakwimimandla, kwaye banconywa kakhulu ngabathengi. Simema ngokunyanisekileyo abahlobo basekhaya nakwamanye amazwe ukuba basityelele!
Umsebenzi wequmrhu: ukwenza ixabiso kubathengi; ukwenza iqonga lophuhliso lwabasebenzi nolonwabo; ukufaka isandla ekusasazeni iikhonsepthi zenkcubeko phambili kunye nenkqubela phambili yoluntu kunye nemvisiswano. Yenza iimveliso zodidi lokuqala kwaye wenze izibonelelo eziphezulu kubathengi.
ukuzinikela ngokunyanisekileyo, uthando ngonaphakade.
Ishishini lodidi lokuqala, ukusebenza okuzinzileyo.
impucuko, umanyano, ukusebenza nzima, imvisiswano
thatha uluntu kwaye usebenzise uluntu
yomelele kwaye inomtsalane
● Ifilosofi yeshishini: ukubhala ngokunyanisekileyo, ukuvelisa izinto okungenamda, inkonzo yanaphakade, ukugqwesa
● Umxholo wosapho: Sebenzisa usapho lwethu oluncinci ngothando, kwaye wakhe usapho lwethu olukhulu ngothando
● Umxholo wenkonzo: intshisakalo, ukunyaniseka, ubungcali, ukugxila, ukugxila kunye nokusebenza ngokukuko
● Umxholo wophuhliso: ukuqokelela iitalente kwaye ufune ukukhula okufanayo
● Umxholo wetalente: isimilo sokuqala, esilungele isikhundla sakhe
● Ifilosofi yobungcali: uthando lomsebenzi, hlonipha abathengi
● Ifilosofi yolawulo: ilula kwaye iyasebenza
Lwedilesi: Igumbi 508, ukwakha A, Greenland Central Plaza, Huaiyin eyahlukileyo, Jinan
Isinyithi seAluminiyam-Zinc, Ukwakha iProfayili yeAluminiyam, IPpgi Ppgl, Hot-kwalenza Steel, Aluminium ngefoyile ye coil, Iphepha leAluminiyam,